नेपालमा काजु खेती कहाँ-कहाँ हुन्छ ? यसरी गर्न सकिन्छ काजु खेती !(भिडियो सहित) « Swadesh Nepal
नेपालमा काजु खेती कहाँ-कहाँ हुन्छ ? यसरी गर्न सकिन्छ काजु खेती !(भिडियो सहित)
काठमाडाें : यो आँप जस्तै एनाकार्डिएसि (Anacardiaceae) परिवार अन्तरगत पर्ने विरुवा हो । यस्को वैज्ञानिक नाम एनाकार्डिएम अक्सिडेन्टल (Anacardium occidentale L.) हो । यस्को फलको आकार मुटुको उल्टो आकारसंग मिल्दो भएकोले यसलाई उल्टो मुटो जस्तो फल भनिएको हो । यस्को विरुवा सदावहार प्रकृतिको १०—१२ मिटर सम्म अग्लो हुन्छ । पातहरु ४—२२ सेन्टिमिटर लामो र २— १९ सेन्टिमिटर चौडा यसो हेर्दा चिउरीको पात जस्तो देखिन्छ । यस्को फेदले खास कुनै निश्चित आकार लिएको हुदैन ।
नेपालमा काजु खेतिको संभावना: नेपालमा काजुखेतिको संभावनालाई हेर्दा तराइको उष्ण प्रदेशिय क्षेत्र खासगरी पूर्व देखि पश्चिम तराइको मैदानी भागमा यसकाे खेति गर्न सकिने संभावना देखिन्छ ।
काजु खेतिको लागि उपयुक्त हावापानी : यो उष्ण प्रदेशिय क्षेत्रमा मात्र हुने फलफुल विरुवा हो । तुषारो पर्ने क्षेत्रमा यस्को खेति गर्न सकिदैन । समुन्द्र आसपासको तटिय क्षेत्र तथा सो सरहको हावापानी पाइने क्षेत्र, सापेक्षिक आद्रतायुक्त उष्ण ( Tropical and sub tropical zone) युक्त समन्द्र सतहवाट ७०० मिटर उचाइ सम्मको वार्षिक वर्षा ६०० मि.मि.हने क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ ।